Hel Shahaadooyinkaaga Qalin-jabinta Maanta »Jaamacadda Hodges - Ogolaanshaha
Categories: Shahaadooyinka Qalinjabinta, Xaqiiqooyinka
Xulo Barnaamijkaaga Shahaadada Qalinjabinta
Hagaha Dugsiyada Internetka: 2020 Kulliyadaha ugu Fiican ee Ku yaal Florida
Shahaadada Qalinjabinta Cybersecurity
Shahaadada 'Cybersecurity Certificate' waa shahaado saacadeed oo ah 18 deyn oo lagu dhammayn karo laba semestar. Waxay isku dhafan tahay mowduucyada nidaamka macluumaadka ballaaran sida Maareynta Istiraatiijiyadeed ee Nidaamyada IT-da iyo Isbeddellada IT-ga oo leh mowduucyo amniga internetka diiradda la saaray sida U hoggaansanaanta Amniga, Hubinta Amniga IT-ga, iyo Saadaalinta Hormarinta. Shahaadadan waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay ku takhasusaan nabadgelyada sare ee xirfaddooda. Intaa waxaa sii dheer, shahaadadan waxaa laga yaabaa inay diyaariso kuwa doonaya inay baraan amniga internetka heer jaamacadeed. Waxaa jira shuruudaha u-qalmitaanka barnaamijkan, oo ay ku jiraan shahaadada bachelorka.
Isku xigxiga Xogta
Shahaadada Maareynta Macluumaadka
Shahaadada Maareynta Macluumaadka waxay isku daraysaa mowduucyo macluumaad ballaadhan mowduucyo sida Isbeddellada Maamulka IT-ga iyo Maareynta Istiraatiijiyadeed oo leh mowduucyada maareynta keydka macluumaadka sida Kaydinta Macluumaadka iyo Nidaamka Taageerada Go'aanka iyo Amniga iyo Hubinta Database. Barnaamijkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad ku hormareyso goobta aad hada ku jirto ama si fiican kuugu diyaarinaya isbedel xirfadeed waxaana laga yaabaa in lagu dhammeeyo laba semestar. Waxaa jira shuruudaha u-qalmitaanka barnaamijkan, oo ay ku jiraan shahaadada bachelorka.
Shahaadada Hoggaaminta Kala-duwanaanta, Sinnaanta iyo Ka-mid-noqoshada
Kala duwanaanta, Sinnaanta iyo Ka Mid noqoshada
Shahaadada hoggaamineed ee Kala-duwanaanta, Sinnaanta iyo Ka-mid noqoshada waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay bartaan sida loo beddelo jawiga shaqada iyadoo la dhiirrigelinayo kala-duwanaanta iyo kobcinta ka-mid-ahaanshaha. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay maamulka iyo shaqaalaha heerka fulinta waxaana laga yaabaa in keligiis la qaato ama la barbar dhigo shahaadada mastarka. Waxaa jira shuruudaha u-qalmitaanka ee barnaamijkan, oo ay ku jiraan shahaadada bachelorka.